XOG: CCC Sharmaake oo qorsheynaya arrimo xasaasi ah, Maxaadse kala socotaa? – Puntlandtimes
XOG: CCC Sharmaake oo qorsheynaya arrimo xasaasi ah, Maxaadse kala socotaa?
NAIROBI(P-TIMES) – Ra’isulwasaarahii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto saaxada siyaasadda sare isagoo midkood u hanqal-taagaya Villa Somaliya iyo Puntland.
Mr. Sharmaake oo hadda ah xubin ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa mudooyinkii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalooyinka Nairobi iyo Dubai, wuxuuna maalmaha soo socota go’aan ka gaari doona musharaxnimadiisa Puntland, balse dad ku dhaw waxey cadeynayaan in uu isku hayo dhawr siyaasadood oo halistooda leh.
Cumar Cabdirashiid waxaa lagu eedeeyaa inuu gacansaar la leeyahay dowladda Imaaraataka, waxaa sidoo kale la aaminsan yahay inuu isaga ka dambeeyay laba mooshin oo fashilmay isla markaana la damacsanaa in lagu rido Xukuumadda Kheyre, wali waxaa la aaminsan yahay inuusan dhamaan damaciisii ahaa inuu Farmaajo ka badali karo Villa Soomaaliya, wuxuuna leeyahay saaxiibo badan oo siyaasadeed iyo xildhibaano isaga taabacsan, lamana dafiri karo awoodiisa maaliyadeed.
Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu furmi doonaa 10-ka bishan September, Cumar Cabdirashiid iyo xulafadiisu waxey mar kale isku dayi doonaan mooshin lagu ridaayo Xukuumada Faderaalka, wuxuuna hadda taageero balaaran ka haystaa dawlad gobaleedyada iyo siyaasiinta gudaha, hadii ay taasi u suurtagasho Cumar Cabdirashiid waa mid kamid ah yoolashiisa xagga siyaasadda, laakiin hadii ay taasi suuragal noqon weyso wuxuu isku sharaxi doonaa xilka madaxtinimada Puntland.
Waxaa la rumeysan yahay in dowladda Imaaraatka ay diyaar u tahay iney lacago xoogan ku taageerto Ra’isulwasaarahii hore ee Soomaaliya, inuu Sharmaake isku soo sharraxo doorashada Puntland waxey dhabarjab ku tahay madaxweynaha xilligaan Cabdiwali Gaas.
Laakiin caqabado waa weyn ayaa haysta Cumar Cabdirashiid oo ay ka mid yihiin arrimaha uu ku lahaa saameynta dhismaha dawlad gobaleedyada, ka dhex akhrisashada Dawladda Imaaraatka Carabta, dagaal uga imaan kara kooxda Muqdisho, haddii uu ku dhawaaqo musharaxnimadii madaxwene-nimada Puntland, waxaana aan wali sugneyn xaaladdiisa siyaasadeed.
qalbi qooqan iyo qooro aan wax qaban qaadoow adaa leh. cumar buur fursada fara ban ayaa soo maray oo uu sharaf iyo qadarin bulshada uga sameysan lahaa laakiin quud ayuu ka doortay. puntland caqaba ayuu ku ahaa oo abadan wax ay puntland ka faaiiday xilalkii federaalka ee uu hay ma jirin. isagoo rais wasaare ah ayaa duulaan qaawan puntland lagu soo qaadayey. waa iska mooye ma darge ah oo meel iska yaal.
horta Cumar wax waa qabtay laakiin sidi la rabey ma noqon. waxaanse wada ognahay inuusan marnaba ku daahin labadi jerree xilka uuhayey taa waa loogu cudurdaari karaa.
Aniga waxan idin shegaya.cumar Abdirashid.siyasadisa wa mid ka duwan siyasinta somalida.oo Qabiilka ku dhisan